सबिता भण्डारी प्रकरण बारे आयो नयाँ यस्तो कुरा, अब के होला ? भिडियो हेरौ – Classic Khabar
सबिता भण्डारी प्रकरण बारे आयो नयाँ यस्तो कुरा, अब के होला ? भिडियो हेरौ
June 27, 2021 95
‘मसँग बोल्ने आँ,ट पनि छैन । म एकदमै हो,पलेस र हे,ल्पलेस भइसकें । के भन्ने केही पनि छैन । टेक केयर, राम्रोसँग बस्नू । धेरै स्ट्र,ङ हुन खोजें तर म भित्रैबाट वी,क भइसकें । अब त्यति धेरै स्ट्रङ हुन सक्दिनँ । म यो दिनदिनैको पे,न नि स,हन सक्दिनँ । दिन–दिनै मलाई यो धेरै नै भइसक्यो । एकदम टो,लरेट गर्न नि नसक्ने भइसकें एकदम इ,नफ नै भइसक्यो ।’
माथि उल्लिखित अति नै द,र्दनाक शब्दहरू चितवनकी सविता भण्डारीका हुन् जसले आफ्नो मृ,त्युपूर्व बहिनीलाई एउटा भिडियोका साथै माथिको अडियो सन्देश पनि पठाएकी थिइन् । उनकी बहिनीका अनुसार सवितालाई आफ्ना ससुराले शरीरका सं,वेदनशील अं,गहरूमा छुन खोज्ने र यो कुरा उनलाई निकै अ,सहज लागेको तर अरूलाई भन्न अ,प्ठ्यारो लागेको बताएकी थिइन् ।
उनकी बहिनीले यस कुरामा आफूलाई समेत विश्वास लाग्न गा,ह्रो भएकाले प्रमाण स्वरूप भिडियो खिच्नका लागि सुझाएको भन्ने कुरा बहिनीको अन्तर्वार्ताबाट देखिन्छ । सबिता भण्डारी प्रक,रणको बिषयमा पुन्य गौतमले आफ्नो बिचार राखेका छन । हेरौ के भने उनले
Prevमनसुनले मात्र आएको होइन मेलम्चीमा बाढी, यस्तो छ कारण
Nextपैसाका लागि आफ्नी सानी दुधे छोरीको माया मा रेर प रपुरुषसँग भागेपछी यि आमा,श्रीमान रुदै आए (भिडियो)